एमसीसीको म्याद भोलि सकिँदै, खारेज हुन्छ ? — onlinedabali.com
एमसीसीको म्याद भोलि सकिँदै, खारेज हुन्छ ?
काठमाडौँ । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को म्याद भोलि (असार १६ गते) सकिँदैछ । असार १६ गतेभित्र संसदले अनुमोदन नगरे स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ । संसद बैठक पर्सी अर्थात असार १७ गते मात्रै बस्ने भएपछि निर्धारित समयभित्र अनुमोदन नहुने भएको हो ।
एमसीसीको बजेट कार्यान्वयन इकाई मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए नेपाल) ले सरकारलाई संसदवाट सम्झौता अनुमोदन गर्न असार १६ गतेसम्म दिएको थियो । त्यो सममा एमसीसीलाई संसदले अनुमोदन नगरे स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ ।
सत्तारुढ (नेकपा) को जारी स्थायी समिति बैठकमा एमसीसी एजेण्डामा छलफल हुन सकेको छैन । पार्टीले आधिकारिक निर्णय गर्न सकेको छैन । यो समाचार तयार पार्दासम्म एमसीसीको म्याद थपको लागि औपचारिक रुपमा कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन । एमसीसी खारेजीको माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन जारी छ ।
सत्तारुढ पार्टीकै नेता नै एमसीसीको म्याद थपबारे विभाजित भएका छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलले पनि अहिलेकै अवस्थामा स्वीकार गर्न नसकिने सुझाव दिएको छ । कार्यदल सदस्य तथा प्रभावशाली नेता भीम रावल, प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, स्थायी समिति सदस्य लिलामणी पोखरेललगायतका नेताहरु कुनैपनि हालतमा एमसीसी हुबहु पारित गर्न नहुन पक्षमा छन् । जारी स्थायी समिति बैठकमा एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा बहुमत नेता छन् ।
त्यसैगरी सरकारका मन्त्री पनि एमसीसीबारे एकमत छैनन् । त्यस्तै अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच पनि एक रुपता छैन । केही अधिकारीहरुले एमसीसीको म्याद थप नगर्नेमा अडान लिइरहेका छन् । सरकारले औपचारिक रुपमा निर्णय गरेको छैन् । यदि अहिलेको अवस्था भोलिसम्म रह्यो भने एमसीसी खारेज हुने सम्भावना बढी छ ।